Kana Uchida Kuchinja Mutauro | Rubatsiro rwepaJW.ORG
Kana uri kudzidza mumwe mutauro kana kuti uchida kuratidza mumwe munhu nyaya iri pajw.org mumutauro wake, shandisa imwe yenzira 3 dziri pasi apa.
Ita kuti zvese zviri paJW zviende mumutauro waunoda
Chinja mutauro wenyaya yauri kuda kuverenga
Tsvaka bhuku mune mumwe mutauro
Kuti uone mitauro yese iri pajw.org, baya kapikicha kakadai kari nechokumusoro kurudyi.
Mutauro mumwe nemumwe uripo une chimwe chezviratidzo zvinotevera kuruboshwe kwawo:
JW.ORG yese kana kuti mamwe mashoko aripo anenge akashandurwa mumutauro uyu. Baya mutauro waunoda.
JW.ORG haisati yashandurwa, asi kana pane mabhuku aunoda kudhaunirodha mumutauro uyu, baya mutauro wacho kuti uone aripo.
Uyu mutauro wemasaini.
Kana mamwe mashoko epajw.org akashandurwa mumutauro wemasaini wawasarudza, iwoyo ndiwo mutauro unenge wava kubuda pese paunovhura jw.org.
Kana jw.org isina kushandurwa mumutauro wemasaini wawasarudza, uchangoona mabhuku aripo emutauro iwoyo wemasaini.
Sezvo pajw.org paine mitauro yakawanda, ita zvinotevera kuti ukurumidze kuona mutauro waunoda:
Sarudza mutauro waunoda: Mitauro 4 yawakapedzisira kuvhura ndiyo ichabuda pekutanga.
Nyora zita remutauro waunoda: Nyora mabhii mashomanana ezita remutauro wacho, mungava mumutauro waunoziva kana kuti semanyorerwo aunoitwa nevaridzi vawo. Semuenzaniso, kana wakavhura jw.org muchiShona asi uri kuda mutauro wechiGerman, unonyora kuti “German” kana kuti “Deutsch.” Paunotanga kunyora, pachatanga kubuda mazita emitauro ine mashoko akarerekera kune zvauri kunyora.
1: Ita izvi pamapeji anenge aine kabhokisi kakanzi Sarudza Mutauro.
Enda panyaya yauri kuda kuverenga kana kuti kuratidza mumwe munhu. Chisarudza mutauro wauri kuda pakabhokisi kakanzi Sarudza Mutauro. (Kana mutauro wacho usipo, zvinoreva kuti nyaya yacho haisati yava kuwanika mumutauro iwoyo.)
Zvaungaita: Ukabaya pakanzi Sarudza Mutauro, kana ukaona kapikicha aka nechokuruboshwe kwezita remutauro waunoda zvinoreva kuti nyaya yacho yakarekodhwa uye unogona kuiteerera.
Kana ukaita zvichangobva kutaurwa pamusoro apa, chichangochinja mutauro wenyaya yawasarudza kwete zvimwe zvose.
2: Kana nyaya yauri kuverenga isina kabhokisi kakanzi Sarudza Mutauro, baya kapikicha kakaita seaka kari nechekumusoro kurudyi. Kana nyaya yacho irimo mumutauro waunoda, ichabva yabuda. Kana isimo, uchabva waendeswa kupeji yokutanga yomutauro iwoyo.
Enda pakanzi MABHUKU NEZVIMWEWO > ZVINHU ZVIRI MUDARIRO. Sarudza mutauro waunoda pakabhokisi kakanzi Ratidza wobaya pakanzi Tsvaga.
Ita zvinotevera kuti ukurumidze kuwana mutauro waunoda:
Kana paine zvakawanda zvinenge zvakashandurwa mumutauro wawasarudza, peji yakanzi ZVINHU ZVIRI MUDARIRO ichangoratidza zvishoma zvacho. Kuti uone mamwe mabhuku mumutauro wawasarudza, sarudza mhando yemabhuku auri kuda (semuenzaniso, MABHUKU UYE MABHUROCHA kana kuti MAGAZINI).
Kana pasina mabhuku emutauro wawasarudza, uchaona malink anokuendesa kune zvinenge zviripo mumutauro iwoyo.